Kaarboon ku jirta tundra | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tundra waa ceel aad u fiican kaarboonka... Uguyaraan waxay ahayd. Maalmahan, awoodeeda keydinta si xun ayaa loo dhaawacay, sababtoo ah kororka heerkulka: the noolaha nool waxay si aad iyo aad ah u sii deynayaan jawiga hawada, halka habka qabashada sawir-qaadista ay saameyn ku yeelatay heerar gaar ah.
Isbedelka cimilada, doogga iyo noolaha nooli inbadan soo saari kara kaarboonkaqaab ah carbon dioxide ama methane, intii ay kaydsan lahaayeen In ka badan toban sano hadda, cilmi baarayaashu waxay degeen xarunta cilmi baarista ee Zackenberg, waqooyiga Greenland, qiimee dheelitirka kaarboonka guud ahaan tundra the cidhiidhiga waqooyiga.
Daraasad lagu daabacay joornaalka Journal of Joophysical Research, kooxda uu hogaaminayo Magnus Lund waxay muujineysaa in qiiqa CO2 ee ay keenaan noolaha uu kordho markii heer kulka uu kaco.
Si loo dajiyo dheelitirka kaarboonka of tundra, saynisyahano ayaa darsay laba shuruudood: heerka kaarboonka lagu sii daayo qaabka CO2 neefsashada, iyo heerka ay dhirta ku kaydinayso sawir qaade. Laga soo bilaabo labadan shuruudood, waxaa suurtagal ah in lagu go'aamiyo in tundra ay tahay il ama ceel kaarboonka.
El waxbarashada waxay muujineysaa in qiiqa CO2 ee ay sababtay neefsashada xayawaanku ay si isdaba joog ah ula socdaan heerkulka. Dhinaca kale, awoodda keydinta kaarboonka ee la xiriira sawir qaade wuu yaraadaa hadba heer kulku. Sida muuqata tani kaydinta joogsadaa markay heerkulka dhaaftay 7ºC.
Macluumaad dheeraad ah - Google waxay ka dhigeysaa raadkeeda kaarboonka mid guud
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Qabso co2 » Tundra wuxuu noqon karaa isha laga helo qiiqa kaarboon
Indooniisiya waxay ka joojisay mamnuucida dhoofinta macdanta ceyriinka
Sababaha uu roob badan ugu da’ayo waqooyiga dunida